I-sinusitis yisifo esibi kakhulu kokubili ekwelapheni nasekuboniseni izimpawu. Kuvame ukukholelwa ukuthi lesi sifo sithathelwana ngokwemvelo futhi sikhula lapho i-membrane yamangqamuzana yendlela yokuphefumula ishintshwe yi-streptococci noma i-staphylococci ebangela ukuvuvukala nokubola kwama-maxillary sinuses.
Kodwa-ke, ukwelashwa okuvamile kakhulu ngama-antibiotics, ama-puncture ahlinzayo, ama-immunomodulator awaletha imiphumela yokugcina. Lesi sifo sihlala sihlala isikhathi esithile, bese izimpawu zayo zibuya futhi, futhi ngoba ogulayo avela kubo konke kuqala futhi. Ngakho-ke, ngezinye izikhathi kubalulekile ukucabangela isifo senzosi ngokwemigomo ye-psychosomatics.
Ngeshwa, akunakwenzeka ukucacisa ngokushesha ukuthi i-genyantritis iqalile. Ukubonakaliswa kokuqala kwalesi sifo kubonakala kumakhaza amaningi:
Ukuzithemba okujwayelekile kanye ne-malaise;
Ngokujwayelekile umuthi wachaza ukudluliselwa ku-otolaryngologist lapho ukuphuma komzimba kungapheli isikhathi esingaphezu kwenyanga, kuyilapho iziguli zikhalaza ngomzwelo ongaphezu kwamashiya nangaphansi kwamehlo, ukuphathwa ikhanda nokubuthakathaka.
Kulesi simo, okuqukethwe okuphawulwe ngokuqondile kungabonakala futhi akunawo iphunga elimnandi. Kulokhu, odokotela batusa ukuvakashela hhayi kuphela i-ENT, kodwa futhi i-allergenist.
Kunezinhlobo ezintathu zokuvuvukala kwama-maxillary sinuses:
Ifomu elihle lesi sifo
Ifomu eliyinkimbinkimbi yesifo libhekene nobukhona bezimpawu ezingenakunakwa:
Ubuhlungu obukhulu ebusweni nasekhanda, ngokutholwa ezindlebeni noma emazinyo;
Ukufutheka, ukusabela okubi ekukhanyeni okukhanyayo;
Ukukhishwa okuzenzekelayo kusuka ekhaleni, ikakhulukazi lapho ikhanda liguqulwa phansi, ukukhishwa kwe-purulent of gray, yellow, green, ngezinye izikhathi ngezimpawu;
Ukubamba nokulahlekelwa iphunga.
Ifomu elingapheli yisimo esibi sesifo. Ngenkambo enjalo, i-sinusitis iyancipha kuphela ngenkathi yonyaka noma lapho umuntu ekhuni, ukuvezwa okuvamile kwideskithophu nokunye okunjalo. Isimo esibucayi kakhulu esibhedlela lesi sifo, ngokuvamile esiphutha ngenxa yezindlebe ezihlanjululwe, imane nje i-SARS noma amazinyo ahlabayo.
Izinhlobonhlobo ze-allergenic ziveza impumu engapheliyo yokuphumula, ukuzwa ukucasuka nokomile emakhaleni, amehlo anamehlo nokuthunga.
Sinusitis, psychosomatic: izimbangela
Imithombo evamile yalesi sifo esiyinkimbinkimbi ihlanganisa:
Ama-anomalies angamahhala noma atholakalayo, isibonelo, ukugoba kwe-septum ekhaleni;
Izifo ezithathelwanayo nezifo ezithathelwanayo;
Izizathu ezingaphandle zithinta izifo;
Uma isizathu sisekukodwa kwalezi zici, enye yezindlela ezamukelekile zokwelapha zizobhekana nalesi sifo:
Uma kwenzeka ukuphindaphinda noma ukungabikho komphumela jikelele, izimpande zesifo kufanele zifunwe esimweni sengqondo sesiguli. Kubalulekile ukuhlaziya ngokucophelela i-sinusitis. I-Psychosomatics lapha, cishe, ayidlala indima yokugcina.
Izwi elidumile lokuthi zonke izifo ezivela emithanjeni, ngokuvamile zithola isiqinisekiso. Ukungafaki ukutheleleka kwefungal kanye nezinye izimbangela eziyinhloso, kufaka phakathi izilonda ezingenzeka, ukubonakala kokuvuvukala okuvamile kwama-maxillary sinus, ukunakekelwa kufanele kuhokhwe esimweni sesimiso sezinzwa kanye ne-psyche. Kukhona into enjengezifo ze-psychosomatic, i-sinusitis ivame ukuvela ngokuqondile ngezizathu ezingokwengqondo.
Kunezici ezithile ezenza i-sinusitis:
Ukucindezeleka okuvamile noma okude isikhathi eside;
Umqondo wokuntuleka kwesidingo nokungazaliseki;
Intukuthelo ehlala njalo ihlangene nokuzihawukela;
Ukukhathala okungokomzwelo okungapheli;
Isidingo sokufakazela abanye kwabanye.
Uhlu lwezinkinga zomzwelo luyaqhubeka. Kunezizathu eziningi ezingenakubalwa zokukhala izinyembezi nokuhlangenwe nakho, futhi, ngokungenaso indlela yokuphuma, ukugcinwa emuva isikhathi eside ngaphakathi, ngokuqinisekile kuzoholela ekuguleni. Futhi njengoba izingqondo ze-psychosomatics zaqala ukusebenza, i-maxillary sinusitis maduze iba yindlala. Kuyisikhathi nje kuphela.
Ngayiphi indlela i-psychosomatics ebonakala ngayo? I-genyantritis ixhunyaniswe ngokuqondile nezinyembezi ezingapheli, noma kunjalo, kungase kuzwakale. Iphuzu eliphelele ukuthi ukuthi ngokukhala okuvinjelwe ngokweqile, izono ze- paranasal azikhishwa . Ngokuphambene nalokho, umswakama kanye nama-mucus akhiqizwa kulezi zono zihlala. Ngoba lo muntu akazange azile ngamabomu. Inhlabathi enhle kakhulu yokukhula nokusebenza kwamabhaktheriya kwakha. Lokhu kuyisimo se-psychosomatic, ngenxa yalokho okuvela khona i-sinusitis, futhi nayo ayikwazi ukubhekana nanoma imuphi umuthi, ukugeza nokukhishwa.
Ngokwehlukana, kubalulekile ukuhlukanisa izizathu zokuvuvukala kwe-adenoids futhi, nakanjani, izono zama-maxillary, ezinganeni. Ngokungafani nabantu abadala, izimila ezikhulayo zinamandla kakhulu ngokuphathelene nokuzivikela, zibekezelela izifo kalula futhi zilulame ngokushesha.
Noma kunjalo, ukuqhuma njalo ngekhala akuvamile. Ngaphambi kokuba uqale ukuthwala umntwana kumahhovisi odokotela nezinqubo ezingenamkhawulo noma ukufaka impumulo yengane nazo zonke izinhlobo zamaconsi, kufanelekile ukucabangela ukuthi konke kulungile kumntwana ngokomzwelo. I-Psychosomatics of sinusitis ezinganeni cishe ayifani nomuntu omdala.
Izizathu ze-psychosomatic ze-sinusitis zakha izici ezimbili ezibonakala zihlukile:
Ukungabi nothando, ukunakekelwa, ukwamukelwa, ukwesekwa nokunakekelwa kwabadala;
Ukunakekelwa kokudumisa, ukunakekelwa kwe-hyper, ukunakwa ngokweqile, ukukhathazeka okukhulu.
Ekuhlukeni kokuqala ingane izwa ingadingekile, ingenasidingo. Uma ukuzwela ngokweqile nokucindezela kwengezwa ekunakekeleni ukunakekelwa kwengane, ke ingane ayiziboni nje ukuthi iyedwa, kufanele ihlangabezane njalo nezilindelo zabantu abadala futhi iqondise umbono wayo. Lokhu ukucindezeleka okwesabekayo okudala izinyembezi ezingapheli zangaphakathi futhi, ngokufanele, kuholela ku-sinusitis.
Ngendlela yesibili yokuziphatha yabantu abadala, ingane ihlupheka ngenxa yokuhluleka ukuziveza, ukwenza okungenani okuthile ngokuzimela. Njengomthetho, lokhu kuqala ngokuhluleka ukungcola kwasebuntwaneni, ukuwela endaweni yokudlala, ngokuhamba kwesikhathi uthole isinqumo esikoleni, njengoba abazali bazothatha zonke izinyathelo kuloluhlolo izingane zabo ezingafakwa. Uthando olunjalo oludlulele luholela ekukhungathekeni ngokomzwelo, umuzwa wokugodlwa kude ezweni emgodini futhi, eqinisweni, ukukhala okufanayo okungenakukhala, okukhula kube sinusitis.
I-genyantritis ezweni lanamuhla eligcwele ukucindezeleka, ubunzima, ukuthuka nokudumazeka, ihlangana kaningi nangokwengeziwe. Ukuvimbela okungcono kakhulu kulokhu kuwukuthula, ukuthula kwengqondo, ukuvumelanisa wena kanye nezwe langaphandle, umusa nomzwelo omuhle. Naphezu kokuthi kunzima ngokwanele, yonke imizamo eyenziwe izolungisa ngokwazo, futhi kanye nokuhlambalaza, intukuthelo, usizi empilweni, kuyodlula futhi sinusitis.
Microphone amplifier ukuqopha yesimanje
Amazing wokulinganisa inkwali - Belarus captivates izinhliziyo izivakashi